जुवाडेको घरमा सिसी क्यामेरा, चकित प्रहरी ! – Satyapati
जुवाडेको घरमा सिसी क्यामेरा, चकित प्रहरी !
सत्यपाटी । २९ कार्तिक २०७८, सोमबार
पोखरा । कार्यालय र व्यापारिक भवनमा सिसी क्यामेराको निगरानी सामान्य हुन थालिसक्यो । अलि ठूलाबडाले चाहिँ घरमै पनि सिसी क्यामेरा राख्न थालेका छन् । बाहिरबाट आफ्नो घरमा को आउँदैछ भन्ने थाहा पाउन चाहनेलाई सिसी क्यामेरा काम लाग्दो प्रविधि हो । चापापानीको एउटा घरमा त्यस्तै सिसी क्यामेरा छ, जसका घरधनीलाई अरुलाई भन्दा बढी चासो आफ्नो घरभित्र कोही आइहाल्छ कि भन्ने हुँदोरहेछ ।
नवीन गौचनले घरमा जडान गरेको सिसी क्यामेराको खास निगरानीमा चाहिँ प्रहरी थियो । किनभने घरमा जुवातास खेल्ने खेलाउने उनी प्रहरी आइहालेको खबर पहिल्यै पाएर सुरक्षित हुन चाहन्थे । र, सिसी क्यामेराले खिचेका दृश्य देखिने टेलिभिजन सेट तास खेल्ने टेबलमै जडान गरेका पनि थिए । तर हुने हार दैव नटार उनले सोचेजस्तो भएन, उनको घर शनिबार राति (बिहान) २ बजे प्रहरीले घेरिहाल्यो । जसै प्रहरी पुग्यो, घरको गेट, ढोका खोल्नभन्दा तास, पैसा र जुवाडे लुकाउन लागि हाले ।
अनेक प्रयासपछि गौचनको घरभित्र पसेको प्रहरी सिसी क्यामेरा जडान गरेको देखेपछि चकित बन्यो र उनीसहित ६ जनालाई पक्राउ गर्यो । साथबाट १८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नगर बरामद पनि गर्यो । ३२ वर्षीय नवीन गौचन, पोखरा महानगरपालिका १२ फूलबारी बस्ने ४४ वर्षीय काजी गुरुङ, पोखरा १२ माटेपानी बस्ने ३८ वर्षीय सूर्य गुरुङ, दैलेख नौमुले गाउँपालिका ८ घर भई पोखरा २६ विजयपुर बस्ने ३५ वर्षीय खम्बसिंह राना, कास्की मादीगाउँपालिका १० घर भई पाखेरा महानगरपालिका १३ संगम टोल बस्ने ३६ वर्षीय खेमराज गुरुङ र पोखरा महानगरपालिका १६ बस्ने ३५ वर्षीय श्याम श्रेष्ठ पक्राउ परे ।
पछिल्लो समय जुवाखालबाट बरामदमध्ये यो सबैभन्दा ठूलो रकम हो । कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी रमेश थापा असार दोस्रो सातादेखि यहाँको कमान्ड सम्हाल्न आएदेखि उनले जुवातास, लागुऔषध कारोबारलाई तारो बनाएर नियन्त्रणमा लागेका छन् । यसबीच थुप्रै जुवाडे र लागुऔषध कारोबारी समातिसकेका छन् । कात्तिक १८ गते कास्की प्रहरीले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाबाट १५ लाख नगदसहित ११ जना जुवाडे पक्रेको थियो । त्यहाँ जुवाडेहरु होटल भाडामा लिएर तास खेलिरहेका थिए । दुर्गम गाउँमा प्रहरीले सुइँको नपाउने भन्दै पोखराबाट गएका उनीहरुलाई पनि प्रहरीले रातिको समयमा समात्न सफल भएको थियो ।
स्याङ्जा हरिनास गाउँपालिका ३ का २८ वर्षीय कमल भण्डारी, पोखरा–१७ ड्यामसाइडका २३ वर्षीय सरोज श्रेष्ठ, स्याङ्जा पुतलीबजार २ का २८ वर्षीय दीपेश गुरुङ, अर्घाखाँची भूमिकास्थान नगरपालिका २ घर भई पोखरा १७ बस्ने ३४ वर्षीय दामोदर पौडेल, पोखरा–१७ छोरेपाटनका २६ वर्षीय विनय गुरुङ र पोखरा–१७ छोरेपाटनका ३२ वर्षीय कर्ण केसी, चितवन भरतपुर महानगरपालिका १ घर भई पोखरा बसपार्क बस्ने ३५ वर्षीय राजु घिमिरे, पोखरा ८ सिमलचौर बस्ने ४३ वर्षीय नारायण सिग्देल, पोखरा ६ बैदामका ४३ वर्षीय राजु कार्की, पोखरा २६ अर्चलेका ३३ वर्षीय स्वागत रानाभाट र बागलुङ नगरपालिका ८ घर भई पोखरा १७ बस्ने ३९ वर्षीय मनबहादुर खड्का त्यतिबेला पक्राउ परेका थिए । जुवाडेहरुलाई सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्धको कसुर अन्तर्गत जुवा खेल्न वा सट्टाबाजी गर्न नहुने शीर्षक मुद्दामा प्रहरीले कारबाही चलाएको छ ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग ६१ तोला सुन, ६८० तोला चाँदी
एनसेलका चार मुद्दा सर्वोच्चमा, लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया रोकियो
५० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा हुँदै, ३० करोड रुपैयाँ निकासा
आज राति प्रक्षेपण गरिँदै नेपालको ‘पहिलो स्याटेलाइट’
परीक्षणका लागि चीनबाट ल्याइँदैछ विद्युतीय बस